Mmiri mmiri oyi na-emetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe? | Netwọk Mgbasa Ozi
O yikarịrị ka n'oge a ị na-enwe obi abụọ ma mgbanwe mgbanwe ihu igwe ọ na-eme n'ezie ma ọ bụ na ọ bụghị, nke bụ ruo n'ókè ezi uche dị na ya ebe ọ bụ na snowfre mere na Spain ụbọchị ndị a yiri ka ọ na-egosi ihe megidere ya.
Otú ọ dị, Ọ dị mfe ịmegharị usoro nke ihu igwe na ihu igwe. Ha nwere mmekọrịta chiri anya, mana ha abụghị otu: ebe nke mbụ na-ezo aka ụkpụrụ ụfọdụ akọwapụtara nke otu ebe, nke abụọ na-ezo aka n'otu data ndị a mana ogologo oge.
N'iburu nke a n'uche, ebili mmiri nke oyi na okpomoku, idei mmiri, ifufe na ihe ndị ọzọ malitere na ikuku bụ ihe omume ndị mgbanwe ihu igwe anaghị egbochi ma na-agbanwe. Dịka onye AEMET na-ahụ maka ihu igwe bụ Ernesto Rodríguez Camino kọwara ya n'ọnụ ụzọ Nkọwa okwu, »Mgbe anyị nwere mgbanwe na ihu igwe, hụrụ ma tụọ atụmatụ ya ga-eme n'ọdịnihu, otu n'ime ihe ndị a hụrụ bụ na mgbanwe mgbanwe dị oke egwu. You nwere ike ịgbanwe osisi ike, ugboro ole… ụdị oyi na-atụkarị ka ọ ga-adị obere ma nwekwaa ike. Mana nke ahụ apụtaghị na a na-egbochi ha ma na mgbe mmadụ pụtara, a na-ajụ mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
N'agbanyeghị eziokwu a na ebili mmiri a anyị na-ahụ dịka ihe pụrụ iche, ọ bụghị mbụ ya mere ma ọ gaghị abụ nke ikpeazụ. N'akụkọ ihe mere eme anyị kachasị ọhụrụ, anyị gosipụtara oke ebili mmiri ndị na-esonụ na Spain:
Site na Disemba 13 rue 29, 2001: nke diri ubochi iri na asaa, onodu kacha nta bu -17ºC ma metuta ógbè 15.
Site na February 8 ruo 15, 2012: site na oge nke ụbọchị 7, ọnọdụ okpomọkụ kacha nta edepụtara bụ -20ºC. Ọ metụtara mpaghara 30.
Ihe omuma ndia nke okpomoku di ala na snowfalls bu otu n’ime ihe ndi puru ikwu ihe kacha mma, ka enwere ike ime ka ndi mmadu mata n’oge ka ha nwee ike ime ihe ndi di nkpa ma zere nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmiri mmiri oyi na-emetụta mgbanwe ihu igwe?